कसरी ट्र्याकप्याड प्रयोग गर्दा तपाईंको आईप्याडको स्क्रोल आकार परिवर्तन गर्ने आईफोन समाचार
ट्र्याकप्याड प्रयोग गर्दा कसरी तपाईंको आईप्याडको स्क्रोल आकार परिवर्तन गर्ने
केही दिन अघि एप्पलले आधिकारिक रूपमा यसको नयाँ किबोर्ड सुरू गर्‍यो जादू कीबोर्ड यो किबोर्ड ११ र १२..11 इन्च आईप्याड प्रोसँग उपयुक्त छ र एक ब्याटमा एक महिनासम्मको ब्याट्री लाइफ छ। सबै भन्दा राम्रो त्यो हो समावेश ट्र्याकप्याड, जसले iPadOS भित्र सम्भावना बढाउँदछ। थप रूपमा, आईओएस १.13.4..XNUMX ले पहिले नै अनुमति दिन्छ बाह्य सामानहरू जडान गर्नुहोस् जस्तै एप्पल किबोर्ड प्रयोग नगरी बाह्य ट्र्याकप्याडहरू वा चूहों। आज हामी तपाईंलाई सिकाउँछौं ट्र्याकप्याड वा बाह्य माउस प्रयोग गर्दा तपाईंको आईप्याडमा स्क्रोल दिशा परिमार्जन गर्नुहोस्।
1 के तपाई प्राकृतिक वा कृत्रिम स्क्रोल मन पराउनुहुन्छ?
2 कसरी तपाईंको आईप्याडमा ट्र्याकप्याड स्क्रोल परिमार्जन गर्ने?
के तपाई प्राकृतिक वा कृत्रिम स्क्रोल मन पराउनुहुन्छ?
स्क्रोलिंग प्रक्रिया हो जुन हामीले स्क्रिन वरिपरि सार्न आईप्याड स्क्रिनमा हाम्रो औंला स्लाइडिंग गरेर गर्छौं। हामीहरू जो आईपल वा म्याकोस जस्ता एप्पल वातावरणमा सामान्य छन् उनीहरू बिग एप्पलबाट बोलाउँदछन् प्राकृतिक स्क्रोल। त्यो हो, हामी ट्र्याकप्याड र हाम्रो औंला प्रयोग गर्दछौं यदि यो एक पिभोट हो जुन स्क्रिनमा निश्चित गरिएको छ। यदि हामी पिभटलाई माथि दिशातिर लियौं भने, स्क्रिन तलतिर जान्छ किनकि हामी स्क्रिनलाई माथि सार्दै छौं। अर्कोतर्फ, यदि हामी पिभोटलाई तल स्लाइड गर्छौं भने स्क्रिन माथि जान्छ किनकि हामी स्क्रिनलाई तल सार्दैछौं।
जे होस्, केहि अपरेटिंग प्रणालीहरूमा जस्तै Windows यो स्क्रोल यति मानक छैन। यो भनिन्छ के छ कृत्रिम स्क्रोल। त्यो हो, जब हामी ट्र्याकप्याडमा माथि औंला स्लाइड गर्छौं, स्क्रिन माथि जान्छ। जब हामी तल स्लाइड, स्क्रिन तल जान्छ। हामी मध्ये जो प्राकृतिक स्क्रोलि toको लागि प्रयोग गरीन्छ, यस स्क्रोलि mode मोड बुझ्न हामीलाई गाह्रो छ। तर सबै पछि, ती समान सामग्रीहरू पहुँच गर्ने बिभिन्न तरिकाहरू छन्।
कसरी तपाईंको आईप्याडमा ट्र्याकप्याड स्क्रोल परिमार्जन गर्ने?
अब प्रश्न आउँछ कहिले हामी यी सर्तहरू बाह्य ट्र्याकप्याड वा माउस प्रयोग गरेर परिचय गर्दछौं। किनभने यो स्पष्ट छ कि टच स्क्रिनको प्रयोग गरेर हामी प्राकृतिक स्क्रोल प्रयोग गर्दछौं। जहाँसम्म, जब हामी एक बाह्य सहायक परिचय हामी दुबै मोडहरू हुन सक्दछौं।
Para स्क्रोल आकार परिमार्जन गर्नुहोस् जब हामी एक गौण प्रयोग गर्दैछौं, केवल निम्न चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
पहुँच सेटिंग्स> तपाईंको आईप्याडमा आईओएस वा आईओएसमा सामान्य जसो संस्करण १ with..13.4 भन्दा बढि
जब तपाईंसँग तपाईंको माउस वा ट्र्याकप्याड जडान हुन्छ, नयाँ सेक्सन देखा पर्नेछ "माउस र ट्र्याकप्याड", नाम परिवर्तन हुनेछ कि तपाईं दुबै जडान हुनुहुन्छ वा दुई सामानहरू मध्ये एउटाबाट।
तपाईंसँग एक विकल्प भनिन्छ «प्राकृतिक स्क्रोल» जुन तपाईं सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं कुन उपकरणबाट आउनुभयो र कुन कुरा तपाईंलाई सबैभन्दा परिचित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » ट्र्याकप्याड प्रयोग गर्दा कसरी तपाईंको आईप्याडको स्क्रोल आकार परिवर्तन गर्ने
भिडियो कल गर्नका लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू